ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Uncategorized » ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ ?
ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ အထူးသဖြင့်လိုအပ်တာကတော့ ရေဓာတ်မဆုံးရှုံးဖို့ပါပဲ။ကလေးသူငယ်များ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက်နေထိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။အပြင်အပူဒဏ်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေထိုင်ပုံနည်းလမ်းများကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
အဝတ်အစားဝတ်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်း ချွေးစုပ်သောချည်ထည်လိုအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ပေးပါ။အပူကိုစုပ်ယူသော အနက်ရောင်လိုအဝတ်အစားများ ပူအိုက်သောအထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အရောင်လွင်သောအဝတ်အစားများ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအဝတ်အစားများကိုသာဝတ်ဆင်ပါ။ဦးထုပ် ထီး နှင့် Sun cream စတဲ့အပူဒဏ်ကာကွယ်တဲ့အရာများကိုဆောင်ထားပါ။
ပူပြင်းတဲ့အချိန်အတတ်နိုင်ဆုံး အပြင်ထွက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။အပြင်ထွက်၍လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ပြေးလွှားခြင်း အပူဒဏ်ကာကွယ်သောအရာများမပါပဲသွားလာခြင်းများကိုရှောင်ရှားပါ။ချွေးထွက်များလာပြီး မူးမိုက်သလိုခံစားရပါက အရိပ်ထဲတွင်အနားယူ၍ ဓာတ်ဆားရည်သောက်သုံးပေးပါ။ ရေခဲရေသောက် တာရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။အပူထဲမှလာပြီးရေတန်းချိူးခြင်းတို့ကိုလည်းရှောင်ရှားရပါမယ်။
by Min Thuta on June 22, 2019 -0Comments
တစ်ခါတစ်ရံ ဖုန်းအပေါ် ကိစ္စအထွေအထူးမရှိပဲ ဖွင့်ကြည့်မိနေတာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဖုန်းတွေဟာ သင့်အတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရရှိစေတယ်ဆိုတာ...
by Min Thuta on June 9, 2019 -0Comments
အခုခေတ် လုပ်ငန်းခွင်မှာ Business English ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Business English ဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြောဆိုနေတဲ့ English နဲ့မတူပါဘူး။လု...
ငွား / ေရာင္း June 28, 2019
2014 Yamaha 350hp, F350XCA 5.3L V8 Four Stroke June 28, 2019
2015 Range Rover Sport HSE June 28, 2019
Used BMW X6 M 2017 June 28, 2019
Used Lexus Lx 570 2016/ Whatsapp : +971581704088 June 28, 2019
We Sale Genuine ssd solution chemical for cleaning June 28, 2019
Selling Original : Samsung S10 Plus, iPhone Xs Max, S10E June 28, 2019
All times are GMT 6.5. The time now is 4:54 pm.